Vonjy Voina · Marsa, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Vonjy Voina · Marsa, 2011
Tantara mikasika ny Vonjy Voina tamin'ny Marsa, 2011
Azia Atsinanana26 Marsa 2011
Horohorontany iray nanan hery 6.8 no namely ny ilany avaratsa-atsinanan'i Myanmar ny harivan'ny Alakamisy 24 Martsa 2011, izay re hatrany akaikin'i sisintanin'i Thailand ary hatrany Vietnam sy Shina lavitra any mihitsy aza. Ilay fihetsehana dia namoizana aina 70 ary nandrava trano maherin'ny 240 tao Myanmar fotsiny. Tao an-tananan'i Tachilek, vatampaty...
Libia: Any Benghazi daholo ny maso (Lahatsary)
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana18 Marsa 2011
Benghazi tanàna faharoa lehibe indrindra eo amin'ny firenena no foibe politika sy fanahy mpikomin'ny hetsika manohitra ny Kolonely mpanao didy jadona Libiana Muammar Al Gaddafi. Miaraka amin'ireo hery ara-tafiky ny mpikomy izay voadoana mafy ihany tamin'ny fanafihan'ireo herin'i Gaddafi, na izany aza, mety ho lasa toerana famaharana farany ho an'ny...
Japana: Mamely ny morontsiraka ny tsunami, tsy mamela mahazo
Amerika Avaratra12 Marsa 2011
Manaraka ilay horohorontany goavana indrindra teo amin'ny tantaran'ity firenena ity, voakapoky ny tsunami mahery indrindra tany aminy indray i Japana. Miraikitra eo amin'ny Fahitalavitra ny vahoaka eraky ny firenena satria mandeha amin'ny vaovao ilay tsunami mihoatra ny 7 metatra izay mamafa ireo fiara sy ireo tranobe tojo ny zotrany.
Libya: Manohy ny fitifirana an'i Zawiya ny tafik'i Gadhafi.
Ity lahatsoratra dia fitantarana manokana momba ny Fihetseham-bahoaka taona 2011. Tifitra tamin'ny alalan'ny fiara mivono vy sy fitaovam-piadiana mavesatra tao Al Zawiya, ao amin'ny faritra avaratra-andrefan'i Libya, dia nanakoako tao amin'ny Twitter. Amin'ireo vaovao vitsivitsy avy an'i Libya fa nisy mpanao gazety voatana ao amin'ny hotely ao Tripoli miandry an'i Kolonely...
Panama: Hofoanana ny lalàna manova ny fehezan-dalanan'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany
Amerika Latina08 Marsa 2011
Ny 3 Martsa, nanome toky ny hanafoana ny lalàna izay manova ny fehezan-dalànan'ny fitrandrahana any Panama ny Filoha Ricardo Martinelli. Voarain'ireo Panamaniana tamin-kafailana ireo vaovao izay nahita ny fanovana ity fehezan-dalàna ity ho fanafihana ny tontolo iainana. Nipoitra avy hatrany tany amin'ireo tamban-jotra sosialy ireo fihetsehim-po.